flow - Synonyms of flow | Antonyms of flow | Definition of flow | Example of flow | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for flow
Top 30 analogous words or synonyms for flow
Hydra-Centaurus Supercluster ၅၀ Mpc အထိ တစ်စက္ကန့်လျင် ၆၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် bulk flow ကို ဖြစ်စေသည်။
ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် တန်ဖိုးများကို ပရိုဂရမ်၏ control flow တွင် ဖေါ်ပြသတ်မှတ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ဥပမာ x :2+2; if x=4 then do_something() ; ။imperative ဘာသာစကားကို ဝေဖန်နိုင်သည့် အချက်မှာ ပုံသေမထားသောကိန်းများကို class တစ်ခုတွင်
ကွန်ပျူတာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပရိုဂရမ်များကို တွက်ချက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်သည်နှင့် တူသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စာအုပ်တွင်းရှိ စာလုံး၊ စာကြောင်းများကို အစီအစဉ်တကျ ဖတ်လေ့ရှိကြသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် နောက်သို့ ပြန်လှန်ဖတ်ခြင်း၊ စိတ်မဝင်စားသည့် စာပိုဒ်များကိုလည်း ကျော်ဖတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ကွန်ပျူတာများသည်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ညွှန်ကြားချက်များကို အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ရှေ့ကျော်၊ နောက်ကျော် ထပ်ကာတလဲလဲ ဆောင်ရွက်တတ်သည်။ ဤသည်ကို ပရိုဂရမ်ဆောင်ရွက်မှု စီးဆင်းပုံ (flow of control) ဟုခေါ်သည်။ ထိုသို့ ခုန်ပြန်ကျော်လွှားပြီး ညွှန်ကြားချက်များကို ထပ်ကာတလဲလဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာများသည် လူသားများ၏ ထိန်းကွပ်မှုမပါပဲ အလိုအလျောက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
NASA X-43 Scramjet အင်ဂျင် အမျိုးအစားကို အသုံးပြုတာကြောင့် Scramjet လေယာဉ်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ Scramjet ဟာ အင်ဂျင်တွင်း ဆီလောင်းကျွမ်းပေါက်ကွဲမှုအားကို Supersonic Air Flow မှာ ဖြစ်စေတာကြောင့် သာမန် လေယာဉ် အင်ဂျင်များနဲ့ မတူပဲ မြန်ဆန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလက အမြန်ဆုံး X-43 ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အခြားသော X စီးရီး လေယာဉ်များလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဟိုင်ပါဆောနီး ပရောဂျက် ဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်က အသံထက် မြန်တဲ့ လေယာဉ်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ About 90 seconds before the second stage cutoff, the center engine shut down to reduce longitudinal pogo oscillations. At around this time, the LOX flow rate decreased, changing the mix ratio of the two propellants, ensuring that there would be as little propellant as possible left in the tanks at the end of second stage flight. This was done atapredetermined delta-v.
Machine language Programs ဆိုသည်မှာ CPU အလုပ်လုပ်မည့်(execute) ညွှန်ကြားချက်များ၏ အစုအဝေး(sequence)ပင်ဖြစ်သည်။ သာမန်CPUများအနေဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များကို တစ်ခုပြီးမှတစ်ခု executeလုပ်သော်လည်း superscalar processor များကမူ ညွှန်ကြားချက်အမြောက်အမြားကို တစ်ချိန်တည်းမှာပင်executeလုပ်နိုင်သည်။ Program flow (program code များ၏အလုပ်လုပ်ရန် အစီအစဉ်)ကို 'jump instructions' ကလွှမ်းမိုးထားသည်။ 'Jump instructions' ဆိုသည်မှာ နောက်ထပ်လုပ်ရမည့် ညွှန်ကြားချက်ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ C++ coding များတွင်အသုံးများသော goto ကဲ့သို့သော statement မျိုးဖြစ်သည်။ Conditional jumps ဖြစ်ပေါ်ရန်ကမူ conditionကိုက်ညီခြင်း မညီခြင်း ပေါ်မူတည်သည်။ Conditional jumps ဆိုသည်မှာ Java programming ကဲ့သို့သော programming languageများတွင် သုံးသော if else statement များကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ line no. 25ကို executeလုပ်ပြီးသောအခါ line no. 26ကို executeလုပ်သင့်သော်လည်း if else အခြေအနေများ(conditions) နှင့်ကိုက်ညီသော အခြား ကုဒ်များကို executeလုပ်သွားခြင်း (jump ဖြစ်သွားခြင်း) ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။